Xog: Muxuu salka ku hayaa khilaafka cusub ee ka dhex-qarxay Farmaajo iyo Rooble? - Caasimada Online
Home Warar Xog: Muxuu salka ku hayaa khilaafka cusub ee ka dhex-qarxay Farmaajo iyo...
Xog: Muxuu salka ku hayaa khilaafka cusub ee ka dhex-qarxay Farmaajo iyo Rooble?
Muqdisho (Caasimada Online) – Khilaaf cusub oo u dhaxeeya madaxweyne Farmaajo iyo ra’iisul wasaare Rooble ayaa soo shaac-baxay wax kayar laba bilood un kadib markii ay ka heshiiyeen khilaafkii hore.
Khilaafka haatan kasoo dhex cusboonaaday labada xafiis ee dalka ugu sarreeya ayaa ka dhashay sida Guddiga Xalinta Khilaafaadka uu toddobaadkii hore kaga falceliyay murankii hareeyay kursiga uu tirsigiisu yahay #HOP67, oo bishii November uu ku soo baxay Taliyaha KMG ee Hay’adda NISA, Yaasiin Cabdullaahi Maxamuud (Yaasiin Farey).
Guddiga Xalinta ayaa 15-kii bishan warsaxaafadeed ku sheegay in hannaanka loo maray doorashada kursigaasi ay aheyd mid waafaqsan habraaca doorashada, taasoo aanay dadku ku qancin.
Ra’iisal Wasaare Maxamed Xuseen Rooble oo saluug ka muujiyay qaabka ay guddiga u maareeyeen tabashada laga keenay kursigaasi ayaa 3 cisho ka dib go’aanka guddiga waxa uu xilka ka qaaday toddoba ka mida xubnaha guddigaasi, oo ku xirnaa Villa Somalia.
Rooble ayaa xubnahaas ku eedeeyey inay lumiyeen madaxbannaanidii guddinimo, ayna ku milmeen siyaasadda. Rooble ayaana bayaan kusoo magacaabay xubnihii bedeli lahaa xubnahaasi.
Ilo wareedyo ayaa sheegaya in Villa Somalia aanay jecleysan, sida loola dhaqmay xubnihii xilka laga qaaday, oo ciidamo ka amar-qaata Wasiirka Amniga Gudaha, Cabdullaahi Maxamed Nuur ay xoog kaga saareen Xarunta Guddiga Xalinta Khilaafaadka. Tani waxay ka dambeysay markii xubnahaasi ay ka horyimaadeen xil ka qaadistaasi.
Tani ayaa Isniintii sababi gaartay in laba garab u kala jabaan Xubnaha Guddiga Hirgelinta Doorashooyinka Heer Federaal, garab taabacsan Madaxtooyada iyo garab kaloo la safan Xafiiska Ra’iisal Wasaaraha.